Xasan Cali Kheyre: Miyaa lagu hungoobey? Mise? – Puntland Post
Posted on June 26, 2019 June 26, 2019 by Liban Yusuf
Muddo hadda laga joogo, laba sannadood iyo badh ayuu Raiisal Wasaare ahaa Xasan Cali Kheyre. Taas oo kasoo bilaabmatey 1-dii – Maarso ee sannaddii 2017kii. Markii uu Madaxweynaha Soomaaliya, uu digreeto ku magacaabey 23-dii – Febraayo, 2017kii Xasan Cali Kheyre. Halka Golaha shacabkuna ay ansixiyeen codeyntiisa dabaddeed 29-kii Maarso. Rejo baahsan, aadna u mugweyn baa laga qabey labada mas’uul ee talada dalka gacanta ku dhigey.
Ololihii hore, ee uu sameeyey Maxamed Cabdullaahi Maxamed “Farmaajo” ayaa shacabka Soomaaliyeed quluubtooda gilgiley, oo in uun u bidhaamiyey naallo soo noqotey. Durbadiiba, waxa uu Xasan lasoo ifbaxey aftahannimo, uu ku sakhraamiyey shacabkii Soomaaliyeed. Riyaaqa iyo taageere xadkiisii dhaafey buu kasbadey, kaas oo horseeday in la illaawo waxyaabo badan, oo loo baahnaa in caqliga Soomaaligu uu isweyddiiyo. Anigeygan, qoraalka qoraya waxa aan kamid ahaa shacabkaas, jidboodey oo weyddiimaha tirada badan aan xasuusanba. Wuxuuna iila muuqdey, nin Eebbahay ku galladey sifooyin badan oo aan siyaasiyiinta Soomaalida, muddo ku arag. Waxa kamid ahaa waxaa iiga dhex muuqdey Xasan: Daacadnimo, Soomaalinimo Jaceyl, Deddaal badan, Waddani, Maamule wanaagsan, Siyaasi aragti fog iwm.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre
Xasan wuxuu ku dhashey tuulada loo yaqaan Jacar, oo ilaa 50km u jirta degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, hilaaddii 1968-kii. Wuxuu muddo kaddib, usoo hayaamey magaalo madaxda dalka ee Muqdisho, halkaas oo uu Dugsigii Hoose/Dhexe iyo Sare ba ku dhammesytey. Kaddib 1991kii, markii dalku burburey, ee dagaalladu bilaabmeen, Xasan wuxuu u soo qaxey dalka Norwey. Dabaddeed muddo afar sanno ah kaddib, oo ku beegan 1994kii ayaa uu bilaabmey Jaamacadda Osolo, gaar haan Kuliyadda Political Science, halka minor ay u aheyd Sociology. Wuxuuna ka qalinjebiyey sannaddii 1998-kii. Intaas kaddib, wuxuu bilaabey Master of Bussiness Adminisration(MBA) oo uu ka bilaabey Jaamacadda Edinburgh Bussiness School, gaar ahaanna Dugsiga heerka labaad ee Ganacsiga Heirot-Watt University. Wuxuuna qalinjebiyey sannaddii 2001-dii. Heerkiisa aqooneed waa intaas. Bal haddana aynu jalleecno heerkiisa khibradeed ama shaqo, oo laga soo bilaabo ilaa markaas uu waxbarashada Academic ah dhammeystey oo ah 2001-dii.
Arrinta kale, baa waxa ay tahay shirkaddii u dambeysey ee uu Xasan Cali Kheyre ka shaqeynayey waa shirkad rabta in ay sahansato shidaalka ku jira dalkeenna. Si kasta oo loogu fududeyn karo helistiisana waa ay u mareysaa. Shirkaddan Soma and Oil Gas, markii ay sahamisey ceelasha shidaalka Soomaaliiya, waxa durbaba qeylo dhaan ka muujisey dawladda Kenya. Arrintanna, in loo fiirsado ayaa ay mudantahay sababtoo ah Kenya iyo shirkaddanba waxa aynnu maqalney waa intii dawladda Farmaajo iyo Xasan Cali kheyre timid. Mar ka horreysey, oo aynnu maqalney ma jirin? Dherigana waxa kulka ka keena waa kuleylka ayaa hore loo yidhi. Xasan Cali Kheyre, waxa uu u egyahay nin u jooga dilaalidda shidaalka Soomaaliya, una dilaalaya shirkadda Soma and Oil Gas. Doorashadiisiina in dawladda Nabad iyo Nolol soo bixisteeda ay gacmo shisheeye ku lug leeyihiin shaki kuma jiro.
Qalinkii: Cabdifataax Xasan Maxamed “Barawaani”
Afeef:- PUNTLAND POST marnaba masuul kama aha aragtida dadka kale, aragtida qoraalkan waxaa leh qofka ku saxiixan, waxaan kaliya oo dhiirigalinaa isdhaafsiga aragtida.